City : Angales ah
gaabinta : UCLA
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of California, Los Angeles
Qor at University of California, Los Angeles
University of California, Los Angeles waa hay'ad dawladeed oo la asaasay 1919.
Fiiga waxbaridda ee University of California, Los Angeles waa $35,000 (Aprox.).
The University of California, Los Angeles, caadi ahaan loo yaqaan UCLA, waxa uu ku yaalaa xaafada Westwood ee L.A., kaliya shan mayl ka Badweynta Pacific. UCLA damaanad guryaha muddo saddex sano ah. Ardayda ku biiri kartaa mid ka mid ah u sii badan 800 ururada ardayga, lugu daro 60 ama cutub si Greek, oo wakiil ka ah oo ku saabsan 13 boqolkiiba ee jirka ardayga. Jaamacadda waxay leedahay tiro ka mid ah kooxaha warbaahinta arday oo ay ku jiraan wargeys, magazine, iyo idaacadaha iyo TV. Bruins UCLA The tartamaan Shirka PAC-12 ee Division NCAA ee aniga iyo si fiican u yaqaan ee kooxaha Polo biyaha ragga guul ay iyo dumarka. Kooxda kubada cagta ayaa Bruins 'ciyaaro kulan ay garoonka caanka ah Rose Bowl ee u dhow Pasadena.
UCLA koobay ee College of Waraaqaha iyo Sciences iyo tiro ka mid ah dugsiyada iyo barnaamijyada ka qalin jabiyay, ay ka mid yihiin Anderson Dugsiga sare kaalinta of Management, Graduate School of Studies Waxbarashada iyo Warfaafinta, Henry Samueli School of Engineering iyo Applied Science, School of Law, David Geffen School of Medicine, School of Public Affairs, School of Nursing iyo School of Public Health. UCLA kale oo uu leeyahay Dugsiga haybadda leh ee Tiyaatarka, Film & Television iyo School of Ilkaha. Medical Center Ronald Reagan UCLA waa mid ka mid ah isbitaalada ugu sareysa tennis ee dalka. Qalinjabiyeyaasha laga xusi karaa waxaa ka mid ah xiddigii hore ee NBA Kareem Abdul-Jabbar, Fanaanada-Xisbi Sara Bareilles iyo actor Sean Astin, ogaada ugu wanaagsan ee uu sameeyay ee Sam Gamgee in “Ee ah Eebaha siddooyinkii” Forbrydelsen film.
African Studies Maraykanka
Studies American Indian
Nashkhadda dhiska iyo farshaxanimada Urban
Studies Asian American
Luqadaha Asian iyo Dhaqammada
Xiddigaha iyo jaamacadaha UCLA
Hawada iyo Oceanic Sciences
Kiimikada iyo Biomolecular Engineering
Chemistry iyo Kiimikada noole
Chemistry / Science Qalabka
Chicana iyo Studies Chicano
Sciences Health Community
Xisaabeed iyo Systems Biology
Ilaalinta ee Ciidanka Booliisku kaladuwan Qalabka
design | Arts Media
Sayniska Dhulka iyo
Ecology iyo Biology Evolutionary
Sciences Environmental Health
Environmental Science iyo Engineering
Film, Television, iyo Digital Media
Faransiis iyo Faransiiska Studies
Kooxaha Waxbarashada Guud
Waayeelka iyo Gerontology
Siyaasadda Caafimaadka iyo Maareynta
Institute oo ka mid ah Degaanka iyo Sustainability
Biology dhamaystiran iyo Physiology
International & Studies Area
International Studies Development
Shaqada iyo Studies Goobta Shaqada
lesbian, gay, Bisexual, iyo Studies Labeeb
Qalabka Science iyo Engineering
Xisaabta / Hawada iyo Oceanic Sciences
Xisaabta / Dhaqaalaha
Farsamo iyo Aerospace Engineering
ayidhi, immunology, iyo kelli Hidaha
Kelli iyo Farmashiga Medical
kelli, cell, iyo Biology Developmental
kelli, gacanta, oo dhamaystiran Physiology
Guuritaanka Image Studies Archive
Near Languages ​​Bari iyo Dhaqammada
Pathology iyo Laboratory Medicine
Maskaxda iyo Biobehavioral Sciences
Arrimaha Bulshada (undergraduate Caruurta)
Slavic Luqadaha Iyo Literatures
Society iyo Hidaha
Spain iyo Portugal
Study of Diinta
World Arts iyo Dhaqammada / Qoob ka ciyaarka
In March 1881, ka dib markii u ololeynta culus by dadka deegaanka Los Angeles, Gobolka California ee Sharci Dejinta idman abuurka ah ee laan koonfureed ee Dugsiga California ee Normal State(taasi oo markii dambe u noqday San Jose State University) ee badhtamaha magaalada Los Angeles si ay u tababaraan macalimiinta dadka sii kordhaysa ee Southern California. The School Normal State ee Los Angeles furay on August 29, 1882, waxa hadda waa goobta Maktabadda Dhexe ee nidaamka Maktabadda Dadweynaha ee Los Angeles ee. xarun cusub oo ka koobnayd dugsiga hoose halkaas oo macalimiin-in-tababar ku dhaqmaan yaabaa farsamo baridda ay carruurta. dugsiga hoose oo la xiriira version maalin jooga, UCLA Lab School. In 1887, dugsiga noqday kuwa loo yaqaan School Normal Los Angeles State.
In 1914, dugsiga u dhaqaaqay xerada cusub ee Vermont Avenue (hadda goobta of Los Angeles City College) Bariga Hollywood. In 1917, UC Regent Edward Augustus Dickson, Ninkaas kaliya ee matalaya koonfur waqtiga, iyo Ernest Carroll Moore, Agaasimaha School Normal ah, bilaabay wada shaqaynaya si ay u qalqaaliyaan Sharci Dejinta Gobolka dugsiga awood si ay u noqdaan labaad University of California campus, ka dib markii UC Berkeley. Waxa ay la kulmeen iska caabin ka Qalinjabiyeyaasha UC Berkeley, xubnaha Northern California ee sharci-dejinta gobolka, iyo reer Benyaamiin bixisaa Wheeler, Madaxweynaha oo ka tirsan Jaamacadda California ka 1899 si ay u 1919, kuwaas oo dhan si aada soo horjeeda fikradda ah campus ah koonfurta. Si kastaba ha ahaatee, David Prescott gaari-, Madaxweynaha cusub ee University of California, ma wadaagno diidmo Wheeler ee. on May 23, 1919, California koonfurta’ dadaallada ayaa abaal Guddoomiyaha markii William D. Stephens saxiixay Bill Assembly 626 sharci, taas oo loo bedelay Normal Dugsiga Los Angeles gelin Southern Branch of the University of California. Sharcigan ayaa la mid ah ku daray in ay barnaamijka undergraduate guud, Kuliyadda Warqadaha iyo Science. The campus Southern Branch furay on September 15 sannaddaas, bixiya barnaamijyada undergraduate labo sanno ah 250 Warqadaha iyo ardayda Sayniska iyo 1,250 ardayda College Macallimiinta, hoos Moore ee jihada socotaa.
Under University of California Madaxweynaha William Wallace Campbell, diiwaangelinta at Laanta Koonfurta si degdeg ah in ay bartamihii 1920-hay'ad la outgrowing ballaariyeen 25 acre Vermont Avenue goobta. Regents The sameeyay search ah meel cusub oo ku dhawaaqay doorashada ee loogu yeero “Beverly Site”galbeed -just ee Beverly Hills-on March 21, 1925 qaranada buuraha dusha ka mid ah weli-madhan Palos Verdes Peninsula. Ka dib markii kooxaha isboortiga galay shir Coast Pacific ee 1926, golaha ardayga Southern Laanta qaatay naaneesta “Bruins”, magac bixiyeen by golaha ardayga ee UC Berkeley. In 1927, Regents u baxshay theSouthern Laanta University of California ee Los Angeles (erayga “at” waxaa si rasmi ah bedelay comma ah 1958, oo waafaqsan xarumaha kale ee UC). In isla sanadkaas, gobolka dhulka qarxay Westwood dhulka iibin $1 million, in ka yar saddex meelood hal meel miraheeda, by horumarinta hantida maguurtada ah Edwin iyo Harold Janss, waayo, kii Talaabooyinka Janss waxaa la odhan jiray.
Asalka ah afar dhisme ahaayeen Library College ee (hadda Powell Library), Royce Hall, Dhismaha Physics-Bayolojiga (hadda Humanities Dhismaha), iyo Chemistry Dhismaha (hadda Haines Hall), gashan agagaarka barxadda a quadrangular on the 400 acre (1.6 km²) campus. The fasalada ugu horeeyay undergraduate on campus cusub lagu qabtay 1929 la 5,500 ardayda. Ka dib markii u ololeynta dheeraad ah by Qalinjabiyeyaasha, awood, Maamulka iyo hogaamiyayaasha bulshada, UCLA ayaa la ogol yahay in abaalmarinta shahaadada Masterka ee 1933, iyo doctorate ah ee 1936, ka dhanka ah iska caabin ah ayaa sii waday ka UC Berkeley.
Ma rabtaa wada hadlaan University of California, Los Angeles ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of California, Los Angeles rasmiga ah Facebook
University of California, dib u eegista Los Angeles
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of California, Los Angeles.
Pepperdine University ku taalla